Inta badan Dalalka Islaamka oo iclaamiyay in maalinta Khamiista ay tahay maalinta koowaad ee Bisha Ramadaan | Jowhar Somali News Leader
Home SOMALI Inta badan Dalalka Islaamka oo iclaamiyay in maalinta Khamiista ay tahay maalinta...
Inta badan Dalalka Islaamka oo iclaamiyay in maalinta Khamiista ay tahay maalinta koowaad ee Bisha Ramadaan
Inta badan dalalka Islaamka ayaa ku dhawaaqay in maalinta berri oo Arbaco ah la buuxinayo 30-ka bisha Shacbaan, isla markaana maalinta Khamiista oo ku beegan 17 bisha May ay tahay maalinta koowaad ee Bisha Ramadaan.
Maxkamadda sare ee Boqortooyada Sacuudiga ayaa sheegtay in maalinta Khamiista ay tahay maalinta ugu horeysa bisha Ramadaan, kaddib war rasmi ah oo ay caawa soo saartay.
Sidoo kale dalalka Urdun, Falastiin, Masar, Indonesia, Kuwait iyo kuwa kale ayaa ku dhawaaqay inay berri tahay maalinta u dambeysa bisha Shacaab, lana buuxinayo 30-ka bisha Shacbaan, halka maalinta Khamiista ay tahay bisha Ramadaan.
Dhinaca kale Wasaaradda Owqaafta iyo arrimaha diinta Xukuumadda Soomaaliya ayaa caawa shaacisay in maalinta berri ay tahay 30-ka bisha Shacbaan, maalinta Khamiistana ay tahay maalinta koowaad ee bisha Ramadaan.
Sidoo kale deegaanada maamulada Soomaaliya ayaa si la mid ah laga iclaamiyay in maalinta Khamiista ay tahay maalinta koowaad ee bisha Ramadaan.
Xarakada Al-Shabaab oo maamusha deegaanada koofurta iyo bartamaha Soomaaliya ayaa iyana shaacisay in maalinta Khamiista ay tahay maalinta ay dhalaneyso bisha Ramadaan.
Sida muuqata dalalka Islaamka ayaa si wadajir ah oo aan khilaaf ku jirin maalin qura u wada soomi doona, iyadoo horay dalalka qaar ay maalmaha ciidaha iyo ramadaanka ay ku kala qeybsami jireen.
Ugu dambeyn bahda Jowhar.com waxay dhamaan Muslimiinta, gaar ahaan Umadda Soomaaliyeed u rajeyneysa in ramadaankan uu kheyrkiisa alle waafajiyo, isla markaana Ramadaankan midka kale uu caafimaad, bash bash iyo barwaaqo ku gaarsiiyo.
Previous articleMadaxweyne Farmaajo oo baaq ka soo saaray dagaalka Tukaraq
Next articleSomaliland-Puntland Clash Leaves 4 Dead